Be Cute Beauty Salon | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Be Cute Beauty Salon | Kamayut
Be Cute Beauty Salon
Be Cute Beauty Salon သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုချိန်ထိအောင်မြင်မှုရရှိနေသော ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်တွင် ခြေထောက်နှိ်ပ်နယ်ခြင်း ၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှိပ်နယ်ခြင်းနှင့် မျက်နှာပေါင်းတင်ခြင်း ၊ မျက်နှာချေးချွတ်ခြင်းများ တို့ပါဝင်ပြီး ဆံကေသာကိုလည်း စိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ပေးနိုင်သောကြောင့် အဆင်ပြေစေသည်။ ၀န်ထမ်းများ၏၀န်ဆောင်မှုကောင်းမှုနှင့် ဈေးနုန်းမှာလည်း သင့်တင့်သောကြောင့် စိတ်ချမ်းမြေ့မှုရရှိနိုင်သောဆိုင်ဖြစ်သည်။
No.8,B -1, Bu Tar Yone Street , Hlaing Township
Be Cute Beauty Salon is opened since 2007 andasuccessful salon till now, which is located at No.8, B -1 , Bu Tar Yone Street, Hlaing Township. They offers the various kinds of services such as foot massage, body massage, body & foot scrub, facial treatment and Hair treatment. The staff also friendly, warmly welcome to the customes and they will serves you with the reasonable price. So, you can feel as you are in best salon.
Aung Mingalar Dental Clinic ( Kamaryut )
Ko Nyi Salon
He & She Beauty Salon
Massage , Hair Saloon, Beauty Others